Xanuunada Laga Qaado Xidhiidhka Lamaanaha Ee Xumaada - Daryeel Magazine
Xanuunada Laga Qaado Xidhiidhka Lamaanaha Ee Xumaada
Xidhiidhka xumaada ee dadka aadka isugu dhow, gaar ahaan lammaanaha ayaa qofka ka dhiga mid xannuunsanaaya, sidoo kalena dhaawac soo gaadho hab-dhiska difaaca cudurrada ee jidhka.
In qofku dareemo murugo badan oo kaga timaad xidhiidh uu ruux la lahaa oo xumaada ma sababto in la soo saaro hormoonnada keena isku buuqa, balse waxay jidhka ka dhigtaa mid diciif ah oo aan iska difaaci karin waxyaabaha dibadda kaga yimaad. Sidaa waxa sheegay cilmi-badhayaal ka tirsan Jaamacadda Ohio Sate Univeristy ee dalka Maraykanka, kuwaasoo tijaabo ka qaaday caafimaadka 85 lammaane murugo la xidhiidho oo is qaban celcelis ahaan wax ka badan 12 sanno.
Cilmi-badhayaashu waxay sheegeen in dadkaas murugadu ka dhalatay jacaylkooda oo xad-dhaaf ahaa, isla markaana soo kala dhexgalay madmadow keena inay kala fogaadaan.
Lammaanayaasha daraasaddan ka qaybgalay waxay buuxinayeen macluumaad warqado su’aalo ku qornaayeen (Questionnaiares) oo ku saabsan sida xidhiidhkoodu yahay, kadibna waxa laga qaadayey dhiig iyo candhuuf si caafimaadkooda wax looga ogaado.
Sidoo kale, qaybgalayaasha cilmi-baadhista waxa laga buuxinayey warbixin ku saabsan calaamadaha murugada iyo tayada hurdadooda.
Khubarada daraasaddan waday waxay heleen in dadkay xidhiidhkooda murugo badan la xidhiidho ay soo saraan celcelis ahaan 11% hormoonka la yidha Cortisol oo ah ka sababa in qofka cadhadu ku badato, halka dadka isku faraxsana aanay wax murugo iyo ciil ah la soo darisin.
Waxa kaloo ay ogaadeen in dadka murugada iskula nooli aannu jidhkoodu awoodin inuu iska difaaco caabuqyada dibadda kaga yimaad oo ay diciifaan unugyada la yidhaa T-Cells ee masuulka ka ah in cudurrada dagaal la galaan.
“Qof kastaba xaaladan way haysan karta oo xidhiidhka uu qof la leeyahay wuu xumaan kara, laakiin in murugo badan kula xidhiidho waxay halis ku tahay caafimaadkaaga.” Sidaa waxa tidhi Mrs. Lisa Jaremka oo hoggaaminaysay cilmi-baadhistan.
Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka Cudurrada Cusub Ee Laga Qaado Taleefoonnada Casriga Ah Iyo Internet-ka